आज अप्रिल फुलः झुक्याउलान् है ! – Gorkha Sansar
आज अप्रिल फुलः झुक्याउलान् है !
by Gorkha sansar
एजेन्सी, १८ चैत ।
गेग्रोरियन क्यालेन्डरको अप्रिल १ तारिकलाई अप्रिल फुलका रुपमा मनाउने गरिन्छ । तर यो अप्रिल फुल किन मनाउन थालियो भन्ने एकिन इतिहास छैन । अप्रिल फुल मनाइने विभिन्न अनुमान भने छन् । मध्ययुगमा युरोपका सबैजसो सहरहरुमा मार्च २५ मा नयाँ वर्षको उत्सव मनाइन्थ्यो । फ्रान्सको केही क्षेत्रमा एक हप्तासम्म नयाँ वर्ष मनाइन्थ्यो । अप्रिल १ देखि नयाँ वर्ष सुरु भएको मान्ने गरिन्थ्यो ।
जो मानिसहरु जनवरी १ तारिकमा नयाँ वर्ष मनाउँथे उनीहरुले अप्रिल १ मा नयाँ वर्ष मनाउनेहरुलाई मुर्ख भन्न थाले । अप्रिल १ नयाँ वर्ष होइन ‘अप्रिल फुल’ हो भन्न थालियो ।
सन् १५६४ देखि फ्रान्सले पनि आधिकारिक रुपमा जनवरी १ लाई नयाँ वर्ष अवलम्वन गर्यो । तर सरकारको त्यो निर्णय मन नपराउनेहरु पनि निस्किए । जसले अप्रिल १ मै नयाँ वर्ष हुनुपर्छ भन्न थाले । यस्तो भन्ने पुरानाहरुलाई नयाँले मुर्ख भन्न थाले भन्ने तर्क दिने गरिन्छ । १६ औं शताब्दीमै अप्रिल महिनालाई नयाँ वर्षका रुपमा युरोपमा अश्विकार गरिए पनि बिक्रम सम्वतमा भने यहि महिनामा नयाँ वर्ष पर्छ । अर्थात वैशाख महिना बिक्रम सम्वतको पहिलो महिना हो ।
अप्रिल १ लाई मुर्ख दिवस मनाउनुको अर्को एक कारण पनि देखिन्छ। अंग्रेज साहित्यकार चान्सरको ‘क्यान्टरबरी टेल्स’ जुन सन १३९२ मा लेखिएको थियो, त्यसमा उनले ‘सिन मार्च बिगन थर्टी डेज एण्ड टु’ उल्लेख गरे । चान्सरको मतलव सम्भवतः मार्च महिनाको ३२ औं दिन अर्थात अप्रिल २ पछि इन्ग्ल्याण्डका राजा रिचर्ड द्वितीयको ‘इन्गेजमेन्ट’ बोहेमियाकी एनसँग भएको वर्ष दिन हुन्छ भन्ने थियो। तर पाठकले ३२ मार्च भन्ने बुझे । खासमा मार्च महिना ३१ दिनको हुन्छ । तर कुरा आयो १ दिनको त्यो ३१ तारिख पछिको दिनलाई मार्च ३२ भन्ने वा अप्रिल १ भन्ने यहि दोधारका बीच त्यही मार्च महिनाको ३२ औं दिनलाई ‘अप्रिल फूल’ मान्न थालियो भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ ।
पछिल्लो समयमा अप्रिल फुललाई मजाकको रुपमा लिई एकले अर्कलाई मुर्ख बनाउने प्रवृति बढेको देखिन्छ। बिभिन्न सामाजिक संजाल मार्फत होस् वा फोन कल मार्फत होस एक अर्कोलाई मुर्ख बनाइ रमाइलो गरिने भएता पनि कहिलेकाहीँ संबेदनशीलता ख्याल नगरी मजाक गर्दा कुनै अप्रिय घटनाहरु पनि घट्न सक्ने कुरालाई भने ख्याल गरिनु जरुरि छ।
सात बुृँदे घोषणापत्र जारी गर्दै विश्व नेवाः सम्मेलन सम्पन्न
दुई जिल्ला जोड्ने पुल जीर्ण
अजिरकोट गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना तर्जुमाको दुरदृष्टि, उद्देश्य तथा रणनीति निर्धारण कार्यशाला गोष्ठी संम्पन्न
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पहिलो प्याकेजको बोलपत्र पेस गर्ने सयम १ महिना थपियाे
विष्णु माझी र मोहन खड्काको आवाजमा सानु माया सार्वजनिक
पालुङटारमा ३९७ जना बेरोजगार
नगरपालिका काे गाडी दुर्घटनामा नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पौडेलसहित ७ जना कर्मचारी घाईते
पालुङटारमा शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुका लागी आधारभूत तालिम सञ्चालन
गोरखाको पालुङ्टारमा लागु अाैषधसहित १ जना पक्राउ
साविक उमावि शिक्षकहरूको पक्षमा लडछु – प्रचण्ड
एकाबिहानै गाेरखाकाे च्याङलीमा बिस्फाेट
छोरी र बुहारीले काँध हाले, जेठी बुहारी शाेभाले दिइन दागवत्ती
२ दिन सार्वजनिक विदा
राजेश पौडेल, सुजन न्यौपाने , प्रजुन श्रेष्ठ, राम बहादुर धामी, अभि गुरुङ, मञ्जिमा ढकाल, बाबुराम गैह्रे